Ọganihu mmadụ na Dell Technology World | Martech Zone
Ọ bụrụ naanị na ị attentionara ntị na teknụzụ site na isi mmalite mgbasa ozi, ị nwere ike iche na ụgbọ ala ndị kwụ ọtọ na-egbu ndị mmadụ, ndị robot na-ewere ọrụ anyị, na teknụzụ na-eduga anyị na mbibi. Dị ka ndị ahịa, echere m na ọ dị oke mkpa na anyị anaghị etinye uche na ngwa na-egbu egbu na-esote, anyị kwesịrị ịlele etu teknụzụ si emetụta ndụ na omume nke ndị ahịa na azụmaahịa.
Eziokwu banyere mgbanwe ntanetị dị nnọọ iche.
Ka anyị jiri ụgbọ ala kwurula. Ansmụ mmadụ na-aga n'ihu ịnya ụgbọ ala na-egbu egbu, na-egbu ihe dịka ndị America 3,287 kwa ụbọchị. Gbọ ọgụgụ isi anaghị egbu… ha ga-azọpụta ndụ. N'ezie, m ga-eme atụmatụ na ha adịworị. Mgbe m na-aga Dell Tech World na Las Vegas, edere m ihe ederede n'okporo ụzọ na-akọwa ụfọdụ n'ime atụmatụ nke ọhụrụ Chrysler Pacifica Agbaziri m. Obi abụọ adịghị ya na ọrụ ndị kwụ ọtọ nke ụgbọ ala ahụ belatara m ohere ịbanye n'ihe ọghọm n'oge njem 5,000-m niile.
Na-arụ ọrụ? Ọ bụ ezie na ọganihu ọ bụla na nkà na ụzụ na-ewepụ mkpa maka ụfọdụ ọrụ, ọrụ ọhụrụ dị ebe a. Afọ iri atọ gara aga, ọ dịghị onye chere (gụnyere onwe m) na m ga-arụ ọrụ ụlọ ọrụ dijitalụ ma mepụta pọdkastị maka ụlọ ọrụ nke bidoro site na ire kọmpụta ụlọ na-arụzi ụgbọala. Enwere m ọtụtụ puku ndị mụ na ha na-arụ ọrụ nke ọma maka ọrụ ndị na-adịbeghị afọ iri ole na ole gara aga.
Enwere m ike ịbụ na ndị pere mpe ma a bịa n'ihe gbasara akpaaka. M a pessimist na-ekwere na akpaaka na-adịghị na-ewere ọrụ; ọ na-ewepụ ihe mgbochi ọbụna. Dị ka akụkụ nke oge a nke Ihe na-enye ìhè Podcast, anyị gbara ajụjụ ọnụ onye guzobere ya DAQRI, ụlọ ọrụ eziokwu na-abawanye nke jikọtara ngwanrọ na ngwaike na sistemụ a na-akpọ Workense.
Gwakọta onye ọrụ aka nwere usoro AR dị ka DAQRI nke nwere ike ikpughe ndetu, ntuziaka, yana jikọtara gị na ọkachamara na ezigbo oge… yana onye ọrụ ahụ nwere ike ịme mgbochi na mmezi mmezi na akụrụngwa ha nwere ike ghara inwe ọzụzụ na . Yabụ, nke ahụ nwere ike ime ka ohere ọrụ anyị bawanye, ọ bụghị dochie ha.
Teknụzụ na-arụ ọrụ nke ọma. Enwekwu nchekwa, ike ngụkọta, na ọnụọgụ ntụgharị data yana belata profaịlụ ike na-enyere aka belata ike kwa ngalaba ọrụ, ọ bụghị ịbawanye ya. Ọ na-enyere anyị aka ịgbanwe ọrụ ọdịnala ndị anyị na-echeghị na a ga-enwe ike ịmalite. Aerofarms, dịka ọmụmaatụ, na-amụba mkpụrụ nke ala site na 390% site na ịkwaga ha n'ime ụlọ, na-etinye ihe dị ọnụ ala, ọkụ dị ọnụ ala na-ege ntị na akuku ọ bụla na ibelata mkpa mmiri site na 95%. Mingkọ ugbo n'ime ụlọ nwere ike ime ka nri na-edozi ahụ dị ọnụ ala ma nwee ike ịnweta onye ọ bụla nọ na mbara ala.
Anọgidere m na-adọ ndị ahịa m aka na ntị na anyị nọ na mgbanwe ọhụụ nke mgbanwe teknụzụ. Scalable Mgbakọ ike, elu-ọsọ wireless njikọ, na-akparaghị ókè nchekwa na-emeghe ọnụ ụzọ ámá na Amamịghe echiche, mmụta miri emi, mmụta igwe, nhazi asụsụ eke, na Internet Ihe.
Adịghị ire ere? Google weputara ngosi ya Ntụziaka Google nke ahụ kwesịrị ịgbanwe obi gị. Onye na-enyere aka Google di n’onu ogugu - izi gi ihe IoT gi ichoro gi. Ọganihu nke ọganihu ndị a nwere ike lie Google ndị asọmpi dịka Apple na Amazon ma ọ bụrụ na ha enweghị ike ijide onwe ha. Ọ bụ ezie na nke ahụ nwere ike ọ gaghị ada ada, cheta na ndị folks echeghị na Nokia na Blackberry ga-efunahụ ọchịchị ha.
Ihe omumu a abughi nani ulo oru uzu, o bu ihe nkuzi diri ulo oru obula. Ngwaahịa na ọrụ ọ bụla dị na mbara ụwa nwere ike ịbawanye mma ma ọ bụ dochie anya teknụzụ ndị a. Companylọ ọrụ ọ bụla nwere ike ịmepụta njikọ na onye na-azụ ahịa na-adịbughị. A na-edochi usoro HVAC n'ụlọ m n'izu na-abịa site na iji usoro ohuru, ịrụ ọrụ nke ọma.
Ka m na-atụ anya maka ụlọ dị jụụ na ụgwọ ume ume dị ala, nnukwu ọganihu bụ na ụlọ ọrụ na-etinye usoro ihe ntanetị na nlekota nke programmable. Sistemu na-abịa na akwụkwọ ikike afọ 10… yana sistemụ nlekota ga-eme ka ụlọ ọrụ HVAC mara nke ọma ma ọ bụrụ na enwere nsogbu ọ bụla. Companylọ ọrụ ọrụ a nwere njikọ 10 afọ kpọmkwem maka ndị ahịa ya site na ikpo okwu a - na-enweghị mkpa maka ikpo okwu nke atọ iji zụọ m. Nke a bụ ihe kacha mma ahịa njigide usoro, mgbe. Na, dị ka onye na-azụ ahịa, ana m anabata njikọ ahụ!
Ọ dị oke mkpa na ụlọ ọrụ gị bidoro iche maka otu ị ga-esi were ma chịkwaa ụlọ ọrụ gị tupu ụlọ ọrụ gị adaba.